Barkimo badan |Shirkadda Wonderful Manufacture And Trade Company Limited waxay ku saleysantahay Maraykanka
Wax kasta oo ay tahay inaad ka ogaato 100% barkin polyester ah
Ma ku dhibtoonaysaa habeennada nasasho la'aanta ah?Hadday sidaas tahay, barkintaadu waxay noqon kartaa dembiilaha.Celcelis ahaan qofku wuxuu ku qaataa 10 saacadood barkintiisa habeen kasta, haddii aan laga samayn 100% polyester, waxaa jira waxyaabo yar oo ay tahay inaad ka ogaato sida tani u saamayso tayada hurdada.
Barkimada suufka dhaqameedku waxay sababaan khilaaf u dhexeeya maqaarkaaga iyo dusha marada, taas oo u horseedi karta dhidid iyo qoyaan timahaaga oo kordha.Waxa kale oo ay keentaa dhibaatooyin sida finan ama dhogorta waxayna abuurtaa jawi korriinka bakteeriyada maadaama dhididku aanu soo bixin marka uu ku xannibmo wejiga inta lagu jiro hurdada.
Dad badan ayaa isticmaala barkimo maalin kasta iyaga oo aan ogaanin faraqa u dhexeeya bulberry xariirta iyo polyesterka.Labadoodaba waxaa loo isticmaali karaa sida kiisaska caadiga ah, laakiin labaduba waxay leeyihiin faa'iidooyin iyo waxyeellooyinkooda.
Dadku waxay door bidaanbarkimada polyester-kabarkinnada xariirta ah ee barkimada sababtoo ah way ka jaban yihiin walina waxay bixiyaan shaqo isku mid ah.Si kastaba ha ahaatee, xariirtu aad bay qaali u tahay waxayna leedahay faa'iidooyin sida caawinta yaraynta laalaabyada maqaarka.Kiis barkimo badanWay ka jaban tahay, dadka qaarna waxay yiraahdeen wuxuu dareemaya simbiriirixo iyo qabow, laakiin sidoo kale waxaa laga samayn karaa walxo synthetic ah oo aan ahayn neefta.
Si kastaba ha noqotee, walxaha synthetic sida polyester-ka ma nuugaan wax qoyaan ah;Waxay si fudud uga tirtiraan maqaarkaaga iyo timahaaga, iyagoo kaa dhigaya inaad dareento mid cusub oo qallayl.Maqaalkani waxa uu faahfaahin dheeraad ah ka bixinayaa abarkin poly satin ah.Sii wad akhriska.
Kiiska Barkimada ee iibka kulul
Barkimooyinka satin polysiyaabo badan ayay faa'iido u yeelan kartaa.Tusaale ahaan, waxay ka hortagaan timaha jebinta iyo qallafsanaanta;ma keenaan laalaabooyin sida kiisaska suufka ah ay sameeyaan waxayna bixiyaan caqabad ka dhan ah caarada boodhka.
Intaa waxaa dheer, maaddada polyester-ka waa mid adag oo ku filan inay iska caabiso waxyeellada biyaha, laakiin waxay ku kacaysaa qiimaha jeexjeexa si fudud haddii ay si degdeg ah u soo gaarto qoyaan badan.Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in la hubiyo inaad heshay kiis polyester-ka ah oo aan xasaasiyad lahayn haddii adiga ama qof kale oo qoyskaaga ka tirsan aad la kulanto xasaasiyad sida neefta ama canbaarta sababtoo ah dadka qaar ayaa laga yaabaa inaysan si fiican uga falcelin walxahan.
Waa go'aan caqli-gal ah in la iibsado100% barkimo polyester ahmaadaama ay jiraan faa'iidooyin badan.Qaar ka mid ah faa'iidooyinka waxaa ka mid ah u adkaysiga yaraanshaha, dayactirka fudud, iyo ka qaalisanaanta alaabta kale.Waxa kale oo aad ka heli kartaa midabyo kala duwan, oo ay ku jiraan caddaan, buluug, ama casaan, oo ka mid ah astaanta aad jeceshahay.
Kiiskii Barkimada Polyester Midabka Ma libdhiyaa?
Barkimo badanwaa doorasho caan ah oo barkimooyin ah sababtoo ah way adkeysanayaan waxaana lagu dhaqi karaa si fudud.Waxay ka samaysan yihiin fiilooyinka dunta synthetic oo isu yimaada si ay u sameeyaan walxo jilicsan.
Polyester sidoo kale waa hypoallergenic, taas oo ka dhigaysa dhar ku habboon dadka qaba xasaasiyadda ama neefta.Si kastaba ha ahaatee, dhammaan walxaha polyester-ka looma wada sinneen-qaar waxa ku jiri kara kiimikooyin sida rasaasta iyo meerkuriga, kuwaas oo sababi kara dhibaatooyin caafimaad muddo ka dib haddii aan si wanaagsan loo daryeelin alaabta.
Iyada oo xulashooyin badan oo la heli karo, waxaa muhiim ah inaad sameyso cilmi-baaris ka hor intaadan iibsan si aad u hubiso inaad hesho tayada ugu fiican ee alaabta suurtogalka ah adigoo buuxinaya baahiyahaaga isku mar!
Ku saabsan Koodka Barkimada ee Satin Poly
● Kor u qaad hurdadaada quruxda: Tani100% polyester satin barkimoka ilaali timaha wejiga ee jilicsan xagashada, xoqidda iyo jiidista, ka caawinta yaraynta darafyada kala go'a iyo hubinta habeenka hurdada quruxda soo celinta.
●Ka tag Maqaarka Hufan: Khibrad u yeelo jiilka soo socda ee dharka kacaanka, dhar satin heer sare ah.Iyadoo walxaha kale laga yaabo inay ku jiidaan timahaaga timaha oo ay maqaarkaaga ka saaraan saliidaha dabiiciga ah, saliidaha muhiimka ah, satin uma eka sida suufka u engejiya.Satin waa sida godsend maqaarkaaga.maqaarkaaga saliidaha dabiiciga ah, saliidaha muhiimka ah, satin uma qallajin sida suufka oo kale.Satin waa sida godsend maqaarkaaga.
● Dareenka Isticmaalaha Gaarka ah: Naqshadeynta dhamaadka xiritaanka baqshadda waxay ka ilaalisaa barkimahaaga inay baxsadaan inta lagu jiro riyadaada macaan.Jibbaar ma jiro, barkimadani waxay leedahay nakhshad fudud oo shid iyo demin si ay kuu keento khibrad gaar ah oo wacan.
● Odhaah cusub oo Casri ah: Bedsure waa qallafsanaan, xitaa-texturedbarkimada satinLabaduba waa jilicsan yihiin oo waara, oo hurdo fiican habeenkii ku hurda
● Daryeel fudud: Satin tayo sare leh ayaa ka adag kana adkeysi badan barkimada xariirta, kuwaas oo u baahan daryeel xirfadeed.U leexo Bedsure'sbarkimada satingudaha, dhig gudaha bacda dharka mesh oo ku dhaq saabuun khafiif ah.
Kaliya noo soo dir astaantaada, summadaada, naqshadeynta xirmada, waxaan sameyn doonnaa jeesjees si aad u hesho muuqaal muuqaal ah si aad u sameyso mid qummanbarkimo badan oo jilicsan,ama fikrad aan dhiirigelin karno
Tusaalaha caddaynta 3 maalmood gudahood
Kadib xaqiijinta farshaxanka, waxaanu samayn karnaa muunada 3 maalmood gudahooda oo si degdeg ah u dirnaa
7-25 Maalmood Bixinta Jumlad
Kiis barkin jilicsan oo caadi ah oo la habeeyey iyo tirada ka hooseysa 1000 xabbo, wakhtiga hogaamintu waa 25 maalmood gudahooda tan iyo markii la dalbaday.